Euractiv, Financial Times, Politico Europe yakaudza ZVIMWE ZVAKAITIKA muVhura Tsamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Euractiv, Financial Times, Politico Europe yakaudza ZVIMWE ZVAKAITIKA muVhura Tsamba
Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Malta Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Muzvinafundo Geoffrey Lipman, purezidhendi weInternational Climate Friendly Travel Community (ICTP) uye Juergen Steinmetz, sachigaro weWorld Tourism Network vakaombera masangano gumi nematanhatu eEurope nekuramba kutora hurukuro pamitambo yeEurope yakarongwa nezvinyorwa zvinotsigira pachena mafuta.
16 anotungamira masangano emasangano akazvimirira akati havachabvuma kukokwa kuti vataure pazviitiko zvezvenhau pamusoro pebumbiro reEU rinotsigirwa nemakambani emafuta.
Vakataura izvi mutsamba yakavhurika kune vapepeti vemasangano matatu enhau ekuEurope, Euractiv, iyo Financial Times nePolitico Europe.
Tsamba yacho inoti: Changamire / Madam, Sevatsigiri veEuropean vezviitiko zvemamiriro ekunze uye nemamiriro ekunze, tiri kukunyorerai kuti tikuzivisei kuti hatichazobvuma kukokwa kuti titaure pazviitiko zvakarongwa nesangano renyu renhau pamutemo weEU nerutsigiro rwezvisaririra makambani emafuta.
Kune indasitiri yemafuta, senge indasitiri yefodya pamberi payo, mufananidzo ndizvo zvese. Kuonekwa seshamwari yepamutemo uye chikamu chemhinduro kumatambudziko emamiriro ekunze kwakakosha. Nekutsigira zviitiko zvepamusoro-soro zvakarongedzwa nenhepfenyuro senge yako, indasitiri yemafuta inotsvagawo chikuva kuti uwane kutendeseka uye kufurira zvisina kukodzera.
Munguva iyo disinformation inopararira pane vezvenhau, uye kana kushambadzira uye zvemukati zvemukati zviri kuwedzera hunyengeri kutaura zvakasiyana, isu tinotenda zvakasimba kuti yemahara midhiya ine basa rakakosha kuita kusimudzira democracy uye kutaura kwakasununguka.
Nekudaro, iko kutsvaga kwekusaziva hakuna kupihwa nekurega iyo fossil indasitiri ichitsigira midhiya mapuratifomu. Kuenderera mberi kwebasa remarasha, oiri uye gasi zvido mukuchinjisa dambudziko remamiriro ekunze uye kukanganisa mashandiro emamiriro ekunze haisi nyaya yemafungiro, uye kubvumidza iyo indasitiri kuti ienderere mberi kuronga hurukuro ingangobatsira kunonoka matanho ekukurumidza anodiwa kudzora kupisa kwepasi rose hunhu hwakaenzana uye nzanga inogona kumira.
Mumashoko emamirioni evana vechikoro vanorova mamiriro ekunze: imba yedu iri pamoto.
Uye indasitiri yemafuta yakasarudzika ine gaba repeturu muruoko rwayo. Kana makambani emafuta echinyakare akashandisa kutendeseka kwemapuratifomu ako enhau sechikamu chehurongwa hwekumisikidza zvimiro zvekupokana paruzhinji uye kuzvimisa padhuze nevanoita sarudzo, uri kuvabatsira kudira mafuta pamoto.
Tingave tinofara kuti iwe ubudise iyi tsamba kuitira kuti vaverengi vako nevatori vechiitiko vaziviswe kuti sei masangano edu asipo pane chero zviitiko zvaunogona kuronga nerutsigiro rwefossil indasitiri. Uye isu tinokukurudzira kuti uenderere mberi kugadzirisa dambudziko rekunyepedzera remafuta echisaririra, nekurega kuronga chero chiitiko nerutsigiro rwemakambani emafuta epasi.
Fossil Mahara Zvematongerwo enyika
European Federation Yveruzhinji Vashandi Unions
Chikafu neMvura Chiito Europe
Shamwari dzePasi Europe
Kutakura & Zvakatipoteredza
Vechidiki Kwemamiriro ekunze
WWF European Policy Hofisi